Ọba Akwụkwọ Anambra Na BPMGC Emee Ụbọchị Ndị Ntorobịa Na Mba Ụwa | Igbo Radio
Ọba Akwụkwọ Anambra Na BPMGC Emee Ụbọchị Ndị Ntorobịa Na Mba Ụwa
A kpọkuola ụmụ na-eto eto, bụ ndị ntorobịa, ka ha teta n'ụra ma mee ezi ihe kwesiri ha dịka ndị ntorobịa, iji tụnye ụtụ nke ha na mmepe obodo, ma sokwazie n'ụzọ dị etu ahụ, bàára onwe ha úrù.
Onyeisi ọba akwụkwọ steeti Anambra, bụ Dọkịta Nkechi Udeze bụ ya kpọrọ oku a n'okwu ya na mmemme ncheta ụbọchị ndị ntorobịa na mba ụwa, nke ahọ 2020. Ya bụ mmemme isiokwu ya bụ "Itinye Ndị Ntorobịa n'Ihe A Na-Eme, Iji Mee Mepụta Ihe Na Mba Ụwa" ('Youth Engagement for Global Action') wèèrè ọnọdụ n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ, ma bụrụkwa nke a chịkọbàra site na njikọaka ọba akwụkwọ Anambra na òtù 'Benjy Poetry and Music Global Concepts'.
Dịka Dọkịta Udeze siri kọwaa, ndị ntorobịa nwere ọrụ dị ukwuu n'ịgbanwe ọnọdụ ala Nigeria mee ka ọ nọrọ n'ezi ogoogo dị elu, mana ha apọghị ime ya ma ọ bụrụ na ha esighị n'ịdà mba ha na ihi ụra ha teta, maka na onye ìsì anaghị achụ oke, ma ya fọdụzie onye ngwọrọ ịch agwọ. Ọ gara n'ihu kọwaa uru dị iche iche ọba akwụkwọ bààrà ndị ntorobịa na onye ọbụla bụ mmadụ, ma kpọkuzie ndị ntorobịa ka ha gbasie mbọ ike iji weta ezi mgbanwe n'ọnọdụ ala Nigeria ma wetakwa ezi ọganihu na ọnọdụ mmepe bụ ịgbà.
N'okwu nke ya, onyeisi òtù 'Benjy Poetry and Music Global Concepts', bụ Maazị Benjamin Anabaraonye gụrụ abụ abụọ o dere maka ụbọchị ahụ, ma mee ka a mara na ndị ntorobịa na ùdo bụ ahụghị ebule ma sị elina dike n'ebe ihe gbasaara mmepe obodo ọbụla dị. O nyezịrị ndị ntorobịa ndụmọdụ ka ha bụrụ ndị bara uru n'obodo nakwa ndị akwalite udo n'ebe ọbụla ha hụtara onwe ha, iji mepụta ihe bara urù.
Na nkụzi ha n'otu n'otu, onyeisi ụlọọrụ 'Dream Weave Africa Consult', bụ Maazị Ohaju Obed Ifeanyi, na onyeisi nkuzi n'ụlọọrụ 'Jassy Coaching Services', Maazị Nwakpadolu Obinna kọwara nsonye ndị ntorobịa n'ihe a na-eme, dịka o siri metụta ọchịchị, na dịka o siri metụta ọrụ aka. Ha gwara ndị ntorobịa ka ha bụrụ ndị ga na-eweta asìsà na njedobe nye nsogbu dị iche eche ala Nigeria na-agabiga ugbu a, karịa iso bụrụ nsogbu a na-egbò ègbò.
Na ntụnye nke ya, onyeisi òtù jikọtara ụmụnwaanyị bụ dọkịta n'ala Nigeria (ngalaba nke steeti Anambra), bụ Dọkịta Chioma Ajatọr katọrọ etu ndị ntoborobịa si emere ka o siri masị ha n'ime oge ọrịa korona ma na-eleghara maọbụ na-enupu isi nyegara ntụziaka ahụ ụlọọrụ mba ụwa WHO maka nyere bụ mgbochi mgbasa ajọ ọrịa ahụ.
O kwuru na ọ bụ ndị ntorobịa socha eme ka ọrịa ahụ na-agbasawanye, site n'akparamagwa ụfọdụ ha na-akpa, ma kpọkuzie ha ka ha sepụ aka n'ihe dị etu ahụ ma jiri ike ha na ọgụgụisi ha sonye ma tụnye ụtụ nke ha n'igbochi mgbasa ọrịa ahụ, ọkachasị site n'ịgbasa ozi na ịkụziri ndị mmadụ ihe ha kwesiri ịma banyere ọrịa ahụ, na ụzọ a pụrụ isi gbochie ya ịgbasà.
Ndị ọzọ dị iche iche kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyèrè Ụkọchukwu Nnaemeka Marcel Chijioke nke ụlọụka 'Living Faith Church, Awka', onye nkuzi ya gbadoro ụkwụ na mpụ na arụrụala, ndị ntorobịa na ọgwụ ike; na Oriakụ Uju Uzor, nke minịstịrị na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ, bụ onye tinyekwara olu ya wee kelee ọba akwụkwọ Anambra na ụlọọrụ na òtù 'Benjy Poetry and Music Global Concepts' maka imerùbe oke ụbọchị ahụ n'ụzọ pụrụ iche.
Mmemme ụbọchị ndị ntorobịa na mba ụwa bụ ụbọchị òtù United Nations wepụtara maka imerùbè ntorobịa n'ụwa gbaa gburugburu, na ilebà anya n'ihe dị iche iche metụtara ha. Ya bụ mmemme na-ewere ọnọdụ n'abalị iri na abụọ nke ọnwa Ọgọstụ ahọ ọbụla.